အကောင်းဆုံးပုံရိပ် ၈ ခု | Androidsis
Rafa Rodríguez Ballesteros | | Android application များ, ဓာတ်ပုံ, လဲ tutorial
ယနေ့တွင် ကျနော်တို့ 24 နာရီကင်မရာမှလျှက်ရှိကြောင်းနေကြသည်။ နေ့တိုင်းငါတို့လက်ကိုင်ဖုန်းရှိတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ကျွန်ုပ်တို့မည်ကဲ့သို့နေထိုင်သည်၊ မည်ကဲ့သို့နေထိုင်သည်ကိုများစွာပြောသောနေ့စဉ်အခိုက်အတန့်များကိုကျွန်ုပ်တို့ဖမ်းယူသည်။ အမှန်မှာကျွန်ုပ်တို့သည်မလိုအပ်ဘဲနေရာယူရန်“ ဖျက်ပစ်နိုင်သော” ဓာတ်ပုံအမြောက်အမြားကိုစုဆောင်းမိသည်မှာမှန်ပါသည်။ သို့သော်တစ်ခါတစ်ရံတွင်ထိုဓာတ်ပုံများ၏ရှုပ်ထွေးမှုကြားတွင်ကျိုးနပ်သောရိုက်ချက်များကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရသည်။
ငါတို့ကြိုက်နှစ်သက်သောစမတ်ဖုန်းများပေါ်၌ပါသောထိုဓာတ်ပုံများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့ဘာလုပ်ရမည်နည်း။ အကောင်းဆုံးပရိုဂရမ်များကိုသင့်အားပြပြီးပြီ အခမဲ့ဓါတ်ပုံများ ဒါပေမယ့်ဒီနေ့သင့်ကိုကျွန်တော်တို့အကြံပေးသွားမှာပါ မူရင်းဖွဲ့စည်းမှုသို့မဟုတ် collage ဖန်တီးရန်အကောင်းဆုံး applications များ။ သင်အကြိုက်ဆုံးဓာတ်ပုံအချို့သာလိုအပ်လိမ့်မည်။ သင်၏ Android စမတ်ဖုန်း ယခုသင်လျှောက်ထားသောလျှောက်လွှာများမှသင်ပိုနှစ်သက်သည်။
ဒီဓာတ်ပုံကိုပုံနှိပ်ထုတ်ဝေဖို့မင်းအမေကဘယ်နှစ်ခါပြောခဲ့လဲ။ ဘယ်ဟာသူတို့ဖုန်းပေါ်မှာနေတဲ့အရှက်ကွဲခြင်းဖြစ်သည်။ နက်ရှိုင်းစွာကျွန်တော်မိခင်များသည်အမြဲတမ်းမှန်သည်ကိုသိသည် သင်၏အကောင်းဆုံးဓာတ်ပုံများဖြင့်လှပသော collage ပြုလုပ်နိုင်ရန် application အချို့ကိုသင်ပြတော့မည်။ အဘယ်ကြောင့်မ, ရလဒ်ကိုသင်ကပုံနှိပ်ထုတ်။ သင့်အိမ်ကိုအလှဆင်ရန်မှတ်ဉာဏ်ရှိလိုလျှင်သို့မဟုတ်မူရင်းလက်ဆောင်တစ်ခုပြုလုပ်လိုလျှင်.
ငါတို့အကြံဥာဏ်တွေပေးမယ့်သူတွေထဲကတစ်ခုကိုသင်ဆုံးဖြတ်ရမယ်။ Google application store ကကျွန်တော်တို့ကိုပေးထားတဲ့ကြီးမားတဲ့ catalog ထဲမှာဓာတ်ပုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ Apps အမျိုးအစားများစွာအတွက်နေရာရှိတယ်။ ဓာတ်ပုံများကိုရယ်စရာကောင်းသောပုံများပြုလုပ်ရန်သို့မဟုတ်လူသိများသော "memes" ကိုဖန်တီးရန် application များရှိသည်။ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အပြီးသတ်နှင့်ဓာတ်ပုံပြန်လည်ထိတွေ့ခြင်းအတွက်အပလီကေးရှင်းများ၊ မူရင်းရေးစပ်သီကုံးရန်အတွက်အက်ပလီကေးရှင်းများ။ ဒီနေ့ကျွန်တော် collages အာရုံစိုက်ပါလိမ့်မယ်။
1 အကောင်းဆုံးဓာတ်ပုံ App များ
1.1 ဓာတ်ပုံများအယ်ဒီတာ Collage Maker 2020
1.2 2020 Collage & Photo Editor
1.4 ဓာတ်ပုံ Grid Maker
အကောင်းဆုံးဓာတ်ပုံ App များ
ဓာတ်ပုံများအယ်ဒီတာ Collage Maker 2020
၎င်းသည်နောက်ဆုံးပေါ် Android application များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည် collages ဖန်တီးခြင်း Google Play မှာပေါ်လာပါပြီ။ ဒါကြောင့်တ ဦး တည်းအဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ် ပိုပြီးပြည့်စုံခြင်းနှင့် updated လုပ်ဆောင်ချက်များစွာနှင့်အတူရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။
ဓာတ်ပုံတည်းဖြတ်သူ Collage Maker တွင်ရှိသည် ကြိုတင်ဒီဇိုင်းတင်းပလိတ်များ အမျိုးအစားအားလုံး။ ဤအရာကြောင့်၎င်းကိုအသုံးပြုရန်အလွန်လွယ်ကူပြီးရှုပ်ထွေးသောပန်းချီကားများမှဖန်တီးနိုင်သည် ပုံရိပ် ၂၀ အထိဓာတ်ပုံတစ်ပုံနှင့်အတူပို့စကတ်များပင်။ ဒါ့အပြင်ပါဝင်သည်အဖြစ် အမျိုးမျိုးသောဘောင်များနှင့်ပုံရိပ်တွေ ကြိုတင်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောကြောင့်လည်း collages ပေးပို့ရန်အသုံးပြုနိုင်သည် ဂုဏ်ယူပါတယ် မွေးနေ့များ၊ မင်္ဂလာဆောင်ပွဲများ၊ မိတ်သဟာယများ၊ နှစ်ခြင်းများသို့မဟုတ်အခြားရက်စွဲများ။
အဆုံးစွန်သောလည်းဖြစ်နိုင်ခြေရှိခြင်းအားဖြင့်ကူညီပေးခဲ့သည် စာသားများနှင့် Emoticons ထည့်ပါ သငျသညျအထကျမွငျသောသူမြားကဲ့သို့။ ဘာလဲ memes ဖန်တီးခြင်းအတွက်အသုံးဝင်သည် သူငယ်ချင်းများနှင့်ဝေမျှရန်ပိုင်ဆိုင်သည်။
နောက်ဆုံးတွင်ဤလျှောက်လွှာတွင်ကိရိယာများလည်းပါဝင်သည် ဓာတ်ပုံတည်းဖြတ်ခြင်း။ ၎င်းကဲ့သို့သောအခြေခံ parameters အချို့ကိုသင့်အားညှိရန်ခွင့်ပြုရုံသာမကဖြစ်သည် တောက်ပအဆိုပါ ခြားနား နှင့် အရောင်, ဒါပေမယ့်ထည့်သွင်းရန်ခွင့်ပြုပါတယ် filter များ ဒါမှမဟုတ်ပင် ပုံရိပ်ပြတ်သားမှု။ ဤနည်းဖြင့်သင်လုပ်နိုင်သည် မှုန်ဝါး ပိုပြီးပရော်ဖက်ရှင်နယ်ထိတွေ့မှုပေးနိုင်ဖို့အတွက်၊ မင်းရဲ့ဓာတ်ပုံထဲကဇတ်ကောင်နောက်ကွယ်ကဘာလဲ
ဓာတ်ပုံ Collage: Collage +
2020 Collage & Photo Editor
ကျနော်တို့ယခင်လျှောက်လွှာများ၏တိုက်ရိုက်ယှဉ်ပြိုင်မှုမှရှောက်သွားသည်။ အဲဒါက app ကို အရမ်းဆင်တူ ကျနော်တို့ရှေ့မှာဖော်ပြခဲ့တဲ့ပေမယ့်အားဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးပြီးသောအရာကိုရန် InShot Inc ကဓာတ်ပုံစတူဒီယိုအစား။ ထိုကဲ့သို့သောကုမ္ပဏီနှစ်ခုအကြားပြိုင်ဆိုင်မှုဖြစ်ပါသည်, သူတို့ရဲ့ applications များအလွန်ဆင်တူစွမ်းရည်များနှင့်အလွန်ဆင်တူအိုင်ကွန်ရှိသည်။
သငျသညျအဘယျသို့သူတို့နှစ် ဦး စလုံးကွဲပြားခြားနားမှုရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးလျှင်နှစ် ဦး စလုံးဖော်ပြထားခြင်းအဘယ်ကြောင့်သင်တွေးမိလျှင်, ဒီသူတို့ရဲ့ကြောင့်ဖြစ်သည် terminal ကိုလိုက်ဖက်တဲ့။ တ ဦး တည်းသည်သင်၏နှင့်အတူကောင်းစွာအလုပ်မလုပ်သောဖြစ်ရပ်အတွက် စမတ်ဖုန်း, သို့မဟုတ်၎င်းကိုအသစ်ပြောင်းခြင်းတွင်လုပ်ခြင်းကိုရပ်တန့်ပါကအခြားတစ်ခုကိုပုံမှန်အတိုင်းဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန်သင်အမြဲကြိုးစားနိုင်သည်။
သင်အလှည့်ကျချောမွေ့စွာလည်ပတ်လိုပါကသင်ကြိုက်နှစ်သက်ရာကိုရွေးချယ်လိုပါကဤအရာသည် Photo Collage & Photo Editor ၏စွမ်းရည်များဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သင်၏ collages များကိုဖန်တီးရန်ခွင့်ပြုသည် ပုံရိပ် ၂၀ အထိ, ကြီးမားတဲ့အရေအတွက်ကရှိပါတယ် တင်းပလိတ်များ, ကြိုတင်ဒီဇိုင်းပုံရိပ်တွေ, မားကို့စ တည်းဖြတ်လို့ရတဲ့၊ မင်္ဂလာပါထည့်သွင်းခြင်းဖြစ်နိုင်ခြေ စာရိုက် y ဓာတ်ပုံများတည်းဖြတ်ရန်။ ဤအရာအားလုံးသည်လူမှုကွန်ယက်များပေါ်တွင်ထုတ်ဝေရန်အာရုံစူးစိုက်ခဲ့သည် Instagram ကို, Facebook က, Snapchat...
Photo Collage - ဓာတ်ပုံတည်းဖြတ်သူ
ရေးသားသူ: ဓာတ်ပုံတည်းဖြတ်သူနှင့် Collage ပြုလုပ်သူ
ဒီမှာငါတို့တတိယအကြိမ်ပြောင်းလဲနေပြီ ဂန်းဒါး အလွန်ကွဲပြားခြားနားသော collage app တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းနှင့်အတူပါ ၀ င်သည့်အရာမှာပန်းချီကားများကိုလုပ်နိုင်ရန်ဖြစ်သည် အပြစ်ဖြေရာ သူ့ကိုစိတ်ပူဖို့လိုတယ် ဓာတ်ပုံကန့်သတ်ချက်။ 18 နှင့် 20 မယခင်ကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏။ ဤတွင်ပုံများကိုရာနှင့်ချီ။ ရေတွက်နိုင်ပြီး application သည်ပြwithoutနာမရှိဘဲ ဆက်လက်၍ အလုပ်လုပ်လိမ့်မည်။
ပြန်၌တည်ရှိ၏ ဒီထက်ပြည့်စုံ ထိုကဲ့သို့သောအဖြစ်အချို့သောအရိုအသေအတွက်အခြားသူများထက် ဓာတ်ပုံတည်းဖြတ်ခြင်း။ အကယ်၍ သင်သည်မိုဘိုင်းကိုယ်တိုင်သို့မဟုတ်အခြား application တစ်ခု၏ image editor ကိုအသုံးပြုပါကအလွယ်တကူလျော်ကြေးပေးနိုင်သည်။ အဲဒါဘာတွေလဲ တင်းပလိတ်များ ဓါတ်ပုံများကိုနည်းအမျိုးမျိုးဖြင့်ဖြန့်ဝေရန်၊ configurable နယ်နိမိတ်အမျိုးမျိုးသော အချိုးအစား အဆိုပါ collage (အချို့သောလူမှုကွန်ယက်များအတွက်) နှင့်ထည့်သွင်းဖို့ option ကို စာသားများ.
သင်ရွေးချယ်လျှင် လိုလားသူဗားရှင်းထက်ပိုမိုတဲ့ resolution ကိုနှင့်အတူ collages 8.000 8.000 pixels ကိုက x။ ၎င်းသည်များစွာသောဓာတ်ပုံများ၏ပုံရိပ်များကိုပုံနှိပ်ခြင်းအတွက်အသုံး ၀ င်သော application တစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်ဤပေးဆောင်ထားသောဗားရှင်းနှင့်အတူကြော်ငြာများကိုဖယ်ရှားပြီးအယ်လ်ဘမ်တစ်ခုလုံးမှ collages များကိုဖန်တီးသည်။ ၎င်းတွင်သင်စိတ်ဝင်စားမှုရှိမရှိစမ်းစစ်ရန်မူကွဲရှိသည်။
Gandr: အကန့်အသတ်ရှိသော collage ပြုလုပ်သူ
ဓာတ်ပုံ Grid Maker
ဒါကငါတို့တစ်ခုပါ collage ဖန်တီးမှုကိရိယာများ အမျိုးမျိုးသောအကြောင်းပြချက်များအတွက်အကြိုက်ဆုံး။ ပထမတစ်ခုကသင့်ကိုဖန်တီးခွင့်ပေးတယ် အများဆုံးမူရင်းရေးစပ်သီကုံး ဘာလို့လဲဆိုတော့ခွဲခွာအနားတွေကိုထောင့်ဖြတ်နေရာချနိုင်လို့ပါ။ ဤအပလီကေးရှင်းများတွင်များသောအားဖြင့်တွေ့ရလေ့ရှိသောပုံမှန်တင်းပလိတ်များအပြင်။
ဒုတိယပုံမှန်အပြင် မင်္ဂလာပါအကြောင်းရှိပါတယ် စတစ်ကာများ အလွန်ကောင်းမွန်စွာဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသောကြောင့်ဓာတ်ပုံများကိုအလွန်ဆွဲဆောင်မှုရှိသည်။ ရုပ်ပုံများ၏အတိမ်အနက်ကိုရိုးရိုးလေးနည်းနည်းဖြင့်ပင်မြှင့်တင်ပေးသည်။ အထူးသဖြင့်မှုန်ဝါး tool ကိုနှင့်အတူပေါင်းစပ်သောအခါ။ တတိယမှာလည်းရှိတယ် နောက်ခံ clipart။ ဓာတ်ပုံအနည်းငယ်သာအသုံးပြုသောအခါနေရာလွတ်များကျန်သောအခါအလွန်အသုံးဝင်သည်။ နောက်ဆုံးတော့ဒါ စာသားများ tienen အလွန်မူရင်းဖောင့် collages ကိုအခြားအထူးထိတွေ့ရခြင်းနှင့်ပျော်စရာ။
သမားရိုးကျ collage application ဖြစ်ခြင်းကြောင့်၎င်းသည်အလုပ်တစ်ခုစီအတွက်ပုံအကန့်အသတ်ရှိသည်။ ဓာတ်ပုံ 20 အထိ။ သို့သော်၎င်းတွင်အချို့ရှိသည် တည်းဖြတ်ရေး tools များ အလွန်အဆင့်မြင့်, အခြေခံအကျဆုံးမှဖြည့်စွက်ရန်ပြုပြင်မွမ်းမံခွင့်ပြုသည် မှုန်ဝါး Instagram ပုံစံ လှည့် ပုံများ, etc
ဓာတ်ပုံတည်းဖြတ်သူ - FotoEditor
ရေးသားသူ: Pic Collage Maker ဓာတ်ပုံတည်းဖြတ်သူ
Moldiv သည် Android Play Store တွင်လူကြိုက်အများဆုံးဓာတ်ပုံတည်းဖြတ်သူတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ ဒီ app အကြောင်းငါတို့ကြိုက်နှစ်သက်သည်မှာ လျှောက်လွှာတစ်ခုတည်းတွင်ကျွန်ုပ်တို့အားကမ်းလှမ်းသောအမျိုးမျိုးသောလုပ်ဆောင်ချက်များကို။ ဈေးကွက်တွင်ကျွန်တော်တို့ကိုဥပမာအားဖြင့် filter များ (သို့) စာသားများကဲ့သို့သော function တစ်ခုတည်းကိုကန့်သတ်ထားသည့်မရေမတွက်နိုင်သော application များရှိသည်။ Y App တစ်ခုတည်းတွင်ထိုကဲ့သို့သောဖြစ်နိုင်ချေများစာရင်းကိုအတူတကွယူဆောင်လာသည့်အသုံးချပရိုဂရမ်များရှိသည်ကိုအလွန်တန်ဖိုးထားသည်.
ဤအက်ပလီကေးရှင်း၏အောင်မြင်မှုအများစုသည်တည်ရှိသည် ၎င်း၏ interface ကို၏ရိုးရှင်း ၎င်း၏ကိုင်တွယ်လွယ်ကူခြင်းနှင့်အလိုလိုသိစေသည်။ ဤအကြောင်းကြောင့်၊ ဓာတ်ပုံတည်းဖြတ်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ယခင်ဗဟုသုတမရှိသောသုံးစွဲသူအမြောက်အများသည်၎င်းကိုပြproblemsနာမရှိဘဲအသုံးပြုနိုင်သည်။ ယခင်ကဓာတ်ပုံ retouching program သို့မဟုတ် application ကိုအသုံးမပြုဖူးသေးသော်လည်းမကြာမီ Moldiv ကိုရရှိနိုင်ပါလိမ့်မည်။
မီးမောင်းထိုးပြရမည့်အရေးကြီးသောအချက်များအနက်မှတစ်ခုမှာဤဆောင်းပါး၌ကျွန်ုပ်တို့ပြောဆိုခဲ့သည့်အတိုင်းသင်၏ဓာတ်ပုံများနှင့် collages များဖန်တီးခြင်းဖြစ်သည်။ Moldiv နှင့်တစ်ပြိုင်နက်တည်းဓာတ်ပုံ ၉ ခုအထိပေါင်းစပ်နိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖန်တီးမှုကိုထည့်သွင်းရန်ကမ်းလှမ်းသောကြီးမားသောဘောင်အမျိုးမျိုးမှရွေးချယ်ရန်လိုအပ်သည်။ ပင်စဓာတ်ပုံများကိုကျွန်ုပ်တို့၏ကြိုက်နှစ်သက်မှုအတိုင်းအတာကို“ Freestyle” option ဖြင့်သုံးနိုင်သည်။.
Moldiv သည်ကျွန်ုပ်တို့လျှောက်လွှာတွင်ရှာသောဝိသေသလက္ခဏာများစွာကိုပေါင်းစပ်ထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့မှတ်ဥာဏ်ကိုမည်သည့်ပုံစံဖြင့်မဆိုပုံစံအမျိုးမျိုးဖန်တီးရန်အမျိုးမျိုးသောရွေးချယ်စရာများနှင့် "လွတ်လပ်မှု" ။။ ဓာတ်ပုံများအတွက်ရွေးချယ်ထားသောကွာဟချက်တစ်ခုစီ၏အချိုးအစားကိုကျွန်ုပ်တို့ညှိနှိုင်းနိုင်သည်။ App တစ်ခုအတွက် Text tool များ၊ filter များနှင့်မရေမတွက်နိုင်သောသက်ရောက်မှုများကိုပေါင်းစပ်ရန်အတွက် Moldiv သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ရွေးချယ်ခြင်းတွင်ထင်ရှားသောနေရာတစ်ခုရထိုက်သည်။
MOLDIV - ဓာတ်ပုံတည်းဖြတ်သူ၊ Collage & Beauty Camera
ရေးသားသူ: JellyBus Inc က
၎င်းသည်မကိုက်ညီသောအက်ပလီကေးရှင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဓာတ်ပုံ application များတွင်ကျွန်ုပ်တို့မကြာခဏတွေ့သော filter များသင်မကြိုက်ပါကသို့မဟုတ်သင်လုပ်လိုသော collage သည်သင်မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းမဟုတ်လျှင်၎င်းသည်သင်၏ App ဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ interface သည်အလွန်ရှုပ်ထွေးမှုမရှိသော်လည်း၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အား Moldiv ထက်အနည်းငယ်ပိုကြာနိုင်သည်။
အက်ပလီကေးရှင်း၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရရှုထောင့်သည် PhotoShop ကဲ့သို့သောအစီအစဉ်များနှင့်ဆင်တူသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ဓာတ်ပုံများကိုအဆင့်မြင့်တည်းဖြတ်ရန်အလွှာအမျိုးမျိုးကိုသုံးခြင်းစွမ်းရည်သည်စတင်မလုပ်ဆောင်သူများအတွက်ပင်ပန်းနိုင်ပါသည်။ အများစုမှာမတည်ရှိနိုင်သောဤအတားအဆီးကိုကယ်တင်ခြင်းသည် \_ t Pixlr သည်ထူးခြားသောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။
ပေါင်းနှစ်သန်းအထိပေါင်းစပ်ထားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုပြုလုပ်နိုင်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖမ်းယူမှုများကိုအဆုံးမဲ့ဖြစ်စေပါသည်။ ဓာတ်ပုံ overlays အသုံးပြုခြင်းနှင့် filter များအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဓာတ်ပုံများသည်အနုပညာလက်ရာတစ်ခုနှင့်ပိုမိုနီးကပ်လာလိမ့်မည်။
Pixlr သည်စာရင်းထဲတွင်ရှိခဲ့သည့်ယခင်လုပ်ဆောင်မှုများကဲ့သို့ပင်ကျွန်ုပ်တို့အားခွင့်ပြုသည့်လုပ်ဆောင်မှုအမျိုးမျိုးကိုထင်ရှားစေသည်။ အဲဒါကိုမီးမောင်းထိုးပြပါ အသုံးပြုသူအကောင့်သုံးခုဗားရှင်းအထိရှိပါတယ်။ Collage ပြုလုပ်ရန်အတွက်ရွေးချယ်စရာများသည် Moldiv ၏ကျယ်ပြန့်သည့်အတိုင်းမများသော်လည်း၎င်းတို့သည်လုံး ၀ ကျေနပ်မှုရှိသည်။ မီးမောင်းထိုးပြ တကယ့်ကိုအံ့သြစရာကောင်းတဲ့ပေါင်းစပ်မှုတွေဖန်တီးဖို့တူညီတဲ့ဓာတ်ပုံရဲ့ဖြတ်တောက်မှုအမျိုးမျိုးနဲ့ collage ဖန်တီးနိုင်တဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေs.
ကျွန်ုပ်တို့ရရှိထားသည် application ကို install လုပ်သည့်အခါ၎င်းသည် level « Starter«, အခမဲ့မဟုတ်ရရှိနိုင်အကျိုးသက်ရောက်မှုခြောက်ရာကျော်နှင့်အတူအဘယ်သူမျှမအားဖွငျ့တိုတောင်းသောကျရောက်ပါတယ်။ ကျွန်တော်မှတ်ပုံတင်ရန်သဘောတူလျှင်ငါတို့ကိုယ်ပိုင် Pixlr အကောင့်ကိုဖန်တီးနေသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ရေးအချက်အလက်« Essentials »သို့ပြောင်းလဲသွားသည်။ ဤအသုံးပြုသူပရိုဖိုင်းနှင့်အတူကျွန်ုပ်တို့တွင်သက်ရောက်မှုများနှင့်ဖြစ်နိုင်ချေများစွာရှိသည်။ နောက်ဆုံး "Pro" version ကိုအခကြေးငွေပေးရသည်။, ကျွန်တော်တို့ကိုလျှောက်လွှာထိန်းချုပ်မှုမှအပြည့်အဝဝင်ရောက်ခွင့်ပေးသည်။ ဤလျှောက်လွှာကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်အလွန်, အခမဲ့ရယူသုံးစွဲနိုင်မှုပင်လျှင်အခြားပေးဆောင်သူများ၏အထက်တွင်ရှိသည်။
Pixlr - အခမဲ့ဓာတ်ပုံတည်းဖြတ်သူ
ရေးသားသူ: Inmagine ဓာတ်ခွဲခန်း
ဒီ app ကသင့်ကိုစိတ်ပျက်စေမှာမဟုတ်ပါဘူး။ သင်သည်ဤအက်ပလီကေးရှင်းနှင့် ပတ်သက်၍ collages ကိုစိတ်အားထက်သန်လျှင်သင်၏ဖန်တီးမှုကိုဖော်ထုတ်နိုင်သည်။ ဒါကြောင့်အသုံးပြုရန်သကဲ့သို့အသွင်အပြင်အဖြစ်ရိုးရှင်းပါသည်သင်သည်သင်၏အကြိုက်ဆုံးဓါတ်ပုံများကိုသင်ရှာဖွေနေသည့်ကိုယ်ပိုင်ထိတွေ့မှုကိုပေးလိမ့်မည်။ Diptic သည် collage ကလေးကစားခြင်းကိုပြုလုပ်သည်။ ၎င်းသည်ဖြစ်နိုင်သမျှများပြားစွာသည်မည်သူမဆိုညွှန်ကြားချက်များမလိုအပ်ဘဲလှပသောဖွဲ့စည်းမှုကိုဖန်တီးရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။
အသုံးပြုသူ panel ကအရမ်းအလိုလိုသိသောကြောင့်ဖန်တီးမှုသူ့ဟာသူပြုဖြစ်ပါတယ်။ အတူ ခြောက်ဆယ်တ ဦး တည်းကွဲပြားခြားနားသောဒီဇိုင်းများ Diptic သည်ကျွန်ုပ်တို့ကိုအထင်ရှားဆုံးအမှတ်တရများဖြင့်မူရင်းဖြစ်ရန်ဖြစ်နိုင်သည်။ Moldiv လိုပဲ Diptic လည်းရှိတယ် ဓာတ်ပုံများကိုထည့်ရန်နေရာမတူညီသောနေရာများ၏အရွယ်အစားကိုပြုပြင်ရန်အတွက်ရွေးချယ်စရာများ.
ကျွန်ုပ်တို့၏အမှတ်တရများကိုမူလပုံစံဖြင့်ကိုယ်ပိုင်ပြုလုပ်လိုပါကအပေါက်များ၏အရွယ်အစားကိုပြောင်းလဲရန်ကျွန်ုပ်တို့အမြဲရွေးချယ်ခွင့်မရှိပါ။ တစ်ခါတစ်ရံတွင်ပြီးပြည့်စုံသောဓာတ်ပုံသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ရိုက်ချက်များနှင့်မကိုက်ညီသောအကန့်အသတ်များနှင့်ထောင့်များရှိသည့်နေရာတွင်မတွေ့ရခြင်းဖြစ်သည်။ Diptic ကကျွန်ုပ်တို့၏တွင်းပုံများကိုချိန်ညှိစရာမလိုပါ။
ဖွဲ့စည်းပုံကိုကန့်သတ်ချက်မရှိဘဲဖန်တီးလိုလျှင်၎င်းသည်သင်၏ App ဖြစ်သည်။ Diptic သည်အခမဲ့ application မဟုတ်သော်လည်းယူရို ၀.၇၅ တန်သည် သငျသညျထူးခြားသော collage လုပ်ဖို့ "သေ" လျှင်။ ၎င်း၏အကျိုးကျေးဇူးများနှင့်ဖြစ်နိုင်ခြေများသည်ဤအသေးစားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပြုလုပ်ရန်ခိုင်မာသောအကြောင်းရင်းများဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပုံများတပ်ရန်လိုသည့်အခါတစ်ခါတစ်ရံအလွန်စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည့်ကြိုတင်ဒီဇိုင်းပုံစံကိုပြုပြင်ရန်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသည်။
ရေးသားသူ: UpTop ကော်ပိုရေးရှင်း
စျေးနှုန်း: € 1.09+
သင်ဤ App ကိုနှစ်သက်မည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့စာရင်းထဲမှာရှိရမယ်။ ဓာတ်ပုံများတည်းဖြတ်ခြင်း (သို့) သင်၏ collage ဖန်တီးခြင်းအတွက်အရေးကြီးသောအသုံးချပရိုဂရမ်များကိုကျွန်ုပ်တို့မြင်တွေ့ပြီးပါပြီ။ ဒါပေမယ့် Fuzel Collage သည်နောက်တစ်ခုကို collage လုပ်သည်။ ၎င်းသည်၎င်း၏ဆန်းသစ်သောအသင်းတော်များနှင့်အတူအံ့အားသင့်စေတဲ့မူရင်း application တစ်ခုဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့ယခင် application များနှင့်လုပ်ခဲ့သကဲ့သို့ Fuzel the မှမီးမောင်းထိုးပြထားသည် ပေါင်းစပ်ဖန်တီးရန်အသုံးပြုသူသည်လွတ်လပ်ခွင့်။ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံအတွက်ကျွန်ုပ်တို့လိုသလောက်ရွေးချယ်နိုင်သည်။ ဓာတ်ပုံတစ်ပုံမှတစ်ရာသို့။ အရာအားလုံး Fuzel နှင့်ကိုက်ညီခြင်းနှင့်အရာအားလုံးငါတို့အကြိုက်ပြုပြင်မွမ်းမံနိုင်ပါသည်။
ဒါပေမယ့်ဖော်ပြခဲ့တဲ့ကျန် Apps များမှထူးခြားတဲ့အရာတခုခုရှိရင်၊ Fuzel ဖြင့်မူရင်းကာတွန်းရုပ်ပုံများကိုသင်ဖန်တီးနိုင်သည်။ ဓါတ်ပုံများအစားဗီဒီယိုတိုများထည့်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ဖန်တီးမှုများသည်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်လိမ့်မည်။ ဤအင်္ဂါရပ်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ "အနုပညာလက်ရာများ" ကိုလူမှုမီဒီယာတွင်မျှဝေရန်အတွက်ရည်ရွယ်သည်။
ကာတွန်းထားသည့်ရလဒ်တစ်ခုဖြစ်သည် ကျော်ကြား GIFs နှင့်အလွန်ဆင်တူတစ်ခုခု။ ဒါပေမယ့်ဒီဖွဲ့စည်းမှုအပြည့်အဝရလဒ်တွေကများစွာသော GIFs များကဲ့သို့တစ်ချိန်တည်းမှာရွေ့လျားတူသောရလဒ်ပါ။ ဒါဟာတကယ်ကိုမျက်စိ - ဖမ်းမိခြင်းနှင့်မူရင်းဖြစ်ပါတယ်။ အကယ်၍ ဗွီဒီယိုများကိုဂရုတစိုက်မှတ်တမ်းတင်ထားပါက၊ ကာတွန်းပုံစံကွဲပြားခြားနားသောကာတွန်းပုံစံများကိုပင်သင်ဖန်တီးနိုင်သည်။
ကြွင်းသောအရာနှင့်ပတ်သက်။ သတင်းကမ်းလှမ်းအပြင်, Fuzel တွင်စတစ်ကာများလည်းပါ ၀ င်သည်။ ကွဲပြားသောအကျိုးသက်ရောက်မှုများဖြင့်ဓာတ်ပုံများကိုအလှဆင်နိုင်သည်။ နောက်ထပ်အားသာချက်တစ်ခုမှာ Fuzel ကိုအမြဲတမ်း update လုပ်ပေးခြင်းဖြစ်သည်နှင့်။ ဤအက်ပလီကေးရှင်း၏ဒီဇိုင်းအဖွဲ့သည်အသိစိတ်ဖြင့်အလုပ်လုပ်သည် အပတ်တိုင်းငါတို့အလှဆင် packages များရှိသည်။
အမှန်တရားကတော့ဂူဂဲလ်စတိုးတွင်ဓာတ်ပုံပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းအတွက်ရည်ရွယ်သည့်အသုံးချပရိုဂရမ်များစွာရှိသည်။ လျောက်ပတ်သောစာရင်းပြုစုရန်အဆုံးမဲ့ဖြစ်လိမ့်မည်များစွာသောများစွာသော။ ဓာတ်ပုံနှင့်ပတ်သက်သောဖွဲ့စည်းမှုများနှင့် collage များရှိသည့် application များကိုလည်း ၄ င်းတို့၏လုပ်ငန်းဆောင်တာများအကြားအရေးကြီးသောရွေးချယ်မှုတစ်ခုအနေဖြင့်အာရုံစိုက်ချင်သည်.
ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒီ application အားလုံးမှာတူညီတာတစ်ခုရှိတယ်။ မဟုတ်ရင်ဘယ်လိုဖြစ်နိုင်လဲ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖန်တီးမှုတစ်ခုချင်းစီသည်အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီဖြစ်ရာကျွန်ုပ်တို့၏လူမှုမီဒီယာပရိုဖိုင်များတွင်မျှဝေခြင်းကိုကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ရုံသာရှိလိမ့်မည်။ ဤသဘောမျိုးဖြင့်ဓာတ်ပုံနှင့်သက်ဆိုင်သည့်အက်ပလီကေးရှင်းအားလုံးသည်လူမှုကွန်ယက်များ၏အလားအလာကိုသိရှိပြီးကျန်ထုတ်ကုန်များနှင့်ကွဲပြားသောထုတ်ကုန်များကိုဖန်တီးရန်အလုပ်လုပ်သည်။
ရည်ရွယ်ချက်ကမင်းအတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်ဖို့ဖြစ်တယ်။ ဒါပေမဲ့သူတို့ကအကောင်းဆုံးမဟုတ်ဘူးဆိုရင်ငါတို့သူတို့ကိုအများကြီးကြိုက်တယ်။။ ကျွန်ုပ်တို့ထင်မြင်ချက်ကို အခြေခံ၍ ရွေးချယ်သည့်အခါတိုင်းလူတိုင်း၏ဆန္ဒအရမိုးရွာရန်အလွန်ခက်ခဲကြောင်းရှင်းနေပါသည်။ ဒီတော့ သင်အကြိုက်ဆုံးဖြစ်သောကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြရန်သင့်အားဖိတ်ခေါ်ပါသည်။ မင်းတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုငါတို့နဲ့အတူမင်းတို့ဝေမျှနိုင်တယ်။ OR သင်ကအရေးကြီးသည်ဟုသင်ယူဆသောလျှောက်လွှာတစ်ခုကိုကျွန်ုပ်တို့ရွေးနိုင်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android application များ » ဓာတ်ပုံ » ဓာတ်ပုံ collage ပြုလုပ်ရန် application များ
Cubot P40 သည်တရားဝင်ဖြစ်သည်။ Quad ကင်မရာဖုန်း (ဗီဒီယို) နှင့်တွေ့ဆုံပါ